जुमाको सलाह – Islam Guide
डिसेम्बर 25, 2017 Comments
अल्लाहले जुमाको दिन जुहरको समयमा जुमाको सलाहलाई अनिवार्य गर्नु भएको छ। यो इस्लामको एउटा महत्वपूर्ण संस्कार र साप्ताहिक पर्व हो। सम्पूर्ण मुस्लिमहरु हप्तामा एक पटक एकै ठाउँमा भेला हुन्छन्, इमामको धर्मोपदेश (खुत्बा) सुन्ने अवसर पाउँछन् र सामुहिक रूपमा जुमाको सलाह पढ्छन्।
जुमाको दिनको महत्व-
साताको महान र उत्कृष्ट दिन जुमा नै हो। अल्लाहले यो दिनलाई रोज्नु भएको छ र अरु समयहरु भन्दा यो समयलाई निकै विशेषताहरु प्रदान गर्नु भएको छ, जस्तै…
यो महत्वपूर्ण दिन अरु समुदायलाई नदिई रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अनुयायीहरुका खास गरिएको छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “हामी भन्दा अघिका समुदायले यसलाई पाउन सकेनन्। यहुदीहरुका लागि शनिवार, ईसाइहरूका लागि आइतबार खास गरिएका थिए तर हामी पछि आयौं तै पनि अल्लाहले हामीहरुलाई जुमाको दिन नै प्रदान गर्नु भयो।” (श्रोत- मुस्लिम : ८५६)
यसै दिन आदम (अलैहिस्सलाम) को जन्म भयो र यसै दिन महाप्रलय हुनेछ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “सर्वोत्तम बार जुमाको दिन नै हो। यसै दिन आदम (अलैहिस्सलाम) को सृष्टि भयो, यसै दिन स्वर्गमा प्रवेश गराइयो, यसै दिन त्यहाँबाट निकालियो र यसै जुमाको दिन महाप्रलय हुनेछ।” (श्रोत- मुस्लिम : ८५४)
कुन व्यक्तिहरुमाथि जुमाको सलाह अनिवार्य छ?
यी व्यक्तिहरुमाथि जुमाको सलाह अनिवार्य छ-
१) पुरुष, महिलामाथि अनिवार्य छैन।
२) सक्षम व्यक्ति, बौलाहा र नाबालकमाथि छैन।
३) स्थानीय बासिन्दा, यात्री तथा शहर बाहिर गाउँका बासिन्दाहरुमाथि अनिवार्य छैन।
४) स्वास्थ्य मानिस, जुमाको लागि जान नसक्ने अशक्तमाथि अनिवार्य छैन।
जुमाको सलाह पढ्ने तरिका र विधि-विधानहरु-
१) जुमाको सलाह अगाडि नुहाइधुवाई गर्नु, सुन्दर पोशाकमा चिटिक्क परेर र अत्तर छर्केर खुत्बा पूर्व नै मस्जिद पुग्नु उत्तम हो।
२) मुस्लिमहरु ठूलो मस्जिदमा भेला हुन्छन्, इमामले मिम्बर (मन्च) माथि चढेर दुई पटक धर्मोपदेश (खुत्बा) दिनुहुन्छ, खुत्बामा ईश्-भयको कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। दुवै खुत्बाको बीचमा बसेर क्षणिक विश्राम गर्नु पर्छ।
३) सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुले इमामको खुत्बा र धर्म उपदेशलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्दछ। कुराकानी र अन्य कुरामा ध्यानाकर्षण गर्नु, जस्तै… गलैचा, कपडा, माटो, ढुङ्गा आदिसित खेल्नु हराम गरिएको छ।
४) खुत्बापछि इमाम तल झर्नु हुन्छ र मानिसहरुलाई ठूलो स्वरमा दुई रकात सलाह पढाउनु हुन्छ।
५) जुमाको सलाह सामुहिक रुपमा पढ्नु अनिवार्य छ, एक्लो व्यक्तिमाथि अनिवार्य छैन। त्यसैले कसैको जुमाको सलाह छुट्यो, कारणवश ढिलो पुग्यो भने उसले जुहरको सलाह पढ्नु पर्दछ।
६) जुमाको सलाहमा ढिलो गइयो र इमामको साथमा एक रकात पनि पाउन सकेन भने उसले जुहरको सलाह पढ्नु पर्दछ।
७) जुन व्यक्तिहरुमाथि जुमाको सलाह अनिवार्य छैन, जस्तै… महिला र यात्रु, यदि उनीहरुले जमातका साथ जुमाको सलाह पढ्छन् भने उनीहरुको सलाह सही हुनेछ र जुहरको सलाह पढ्नु पर्दैन।
यी व्यक्तिहरुका लागि जुमाको सलाह माफ गरिएको छ-
जुन व्यक्तिहरुका लागि जुमाको सलाह अनिवार्य गरिएको छ, उनीहरुलाई जुमाको लागि हाजिर हुनु एकदम जरुरी छ र बिना कुनै नितान्त कारण यसलाई कदापि छोड्नु हुँदैन। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे आस्थावानहरु हो ! जुमाको दिन अजान सुन्ने बित्तिकै व्यवासय र कामकाज बन्द गर र मस्जिदतर्फ जाऊ। यदि तिमीहरू ज्ञान राख्छौ भने यसैमा नै तिमीहरुको फाइदा छ।” (श्रोत- सूरह अल्-जुमुआ : ६२/९)
सांसारिक कामकाजमा लिप्त हुने र बिना कुनै नितान्त कारण जुमाको सलाहमा उपस्थित नहुनेहरूको मुटुमाथि मोहर लगाई दिने चेतावनी दिएको छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “जसले तीन जुमा बिना कारण पढेन अल्लाहले उसको हृदयमा मोहर लगाई दिनुहुन्छ।” (श्रोत- अबु-दाऊद : १०५२, अहमद : १५४९८) मोहर लगाउनु भनेको उसको मुटुलाई कपटी र काफिरहरु झैं कठोर बनाई दिनुहुन्छ।
जुमाबाट अनुपस्थित हुने उचित कारणहरु- सहन शक्ति भन्दा बढी कष्ट हुनु, व्यापार र स्वास्थ्यमा ठूलो आघात पुग्ने खतरा हुनु, जस्तै… रोग र आपतकालीन अवस्थाहरु।
के जागिर र व्यवसाय जुमाबाट अनुपस्थित हुने कारण बन्न सक्छ?
वास्तवमा सधैं गरिराख्ने कामकाज जुमाको सलाहबाट अनुपस्थित हुने कुनै कारण होइन। अल्लाहले जुमाको दिन कामकाजलाई छोडेर जुमामा उपस्थित हुन अनिवार्य गर्नु भएको छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे आस्थावानहरु हो ! जुमाको दिन अजान सुन्ने बित्तिकै व्यवासय र कामकाज बन्द गर र मस्जिदतिर जाऊ। यदि तिमीहरू ज्ञान राख्छौ भने यसैमा नै तिमीहरुको फाइदा छ।” (श्रोत- सूरह अल्-जुमुआ : ६२/९) मुस्लिमले यस्तो कामकाज र जागिर गर्नु पर्छ, जुन कार्यले अल्लाहको उपासनामा बाधा नपुर्याओस्, यद्यपि त्यसको आय अरु भन्दा कम किन नहोस्।
अल्लाहले भन्नु भएको छ… “जो अल्लाहसित भय राख्छ, अल्लाहले उसको लागि बाटो निकालि दिनुहुन्छ र उसलाई यसरी आहार र जीविका प्रदान गर्नुहुन्छ, जसको ’boutमा उसले सोचेको पनि हुँदैन र जो अल्लाहमाथि आश्रित हुन्छ, अल्लाह उसको लागि पर्याप्त हुन्छ।” (श्रोत- सूरह अत्-तलाक : ६५/२-३)
जुमाबाट अनुपस्थित हुने उचित कारणहरु-
जुन व्यक्तिहरुमाथि जुमाको सलाह अनिवार्य छ, उनीहरुले कुनै दैनिक कामकाजले जुमाको सलाह छोड्नु वैध छैन, तर दुई अवस्थामा जायज छ-
१) ठूलो हित लुकेको कुनै काम हुनुपर्छ, जसलाई उसको अनुपस्थितिमा प्राप्त गर्न सकिदैन, अन्यथा मानिसको ज्यान जान सक्छ वा करोडौंको घाटा हुन सक्छ र यो कार्यभार सम्हाल्ने उसको कोही नायब पनि छैन।
आपतकालीन बिरामीहरुलाई उपचार गर्ने चिकित्सक।
पाले, बैंकका चौकिदार, अपराधिक क्रियाकलापहरु र अवैध रुपमा माल ओसारपसार गर्नेहरुलाई समाउन खटाइएका विशेष प्रहरी।
ठूल-ठुला कारखानामा कामको सर्वेक्षण गर्न राखिएको इन्जिनियर जसले मिनेट-मिनेटमा निरीक्षण गरि राख्नु पर्ने हुन्छ।
२- यदि साहुले जुमाको लागि फुर्सद दिदैन र त्यो काम नै उसको आहारको असल श्रोत छ, यो बाहेक अन्य जागिर पनि पाउन गाह्रो छ, जागिर छोड्यो भने आफू र आफ्नो घरपरिवारको दुई छाक टार्न धौ-धौ पर्ने अवस्था सृजना हुने डर छ भने अर्को जागिर नभेटुन्जेल वा स-परिवारको गाँसबासको राम्रो व्यवस्था नहुन्जेल जुमाको सलाह छोड्न सकिन्छ।